मलेसियामा नाम मात्रैको न्युनतम १५०० तलब, नेपालीले अझै पाएनन ! - jagritikhabar.com
मलेसियामा नाम मात्रैको न्युनतम १५०० तलब, नेपालीले अझै पाएनन !
मलेसियामा काम गर्ने बिदेशी कामदारहरुको न्युनतम तलब १५०० आर एम भनिए पनि नेपाली लगायत अन्य देशका कामदारले सो रकम पाउन सकेका छैनन् ।
मलेसिया सरकारले न्युनतम तलब मापन गरे पनि कम्पनीले आफ्नो मनोमानी रुपमा मलेसिया सरकारले तोकेको न्युनतम तलब पाउन सकेका छैनन् । केही राम्रा कम्पनीहरुले न्युनतम तलब दिए पनि अधिकाश कम्पनीहरुले भने न्युनतम तलब नदिएको पाइएको छ ।
उता मलेसिया सरकार समेत अनुगमन र कारबाही नगर्दा झनै बेतिथी बढेको छ । यता मलेसियाले अष्ट्रेलियाको फार्म लेबर भिसा योजना नलगाउने निर्णय गरेको छ किनकि यो स्थायी बसोबास को लागी तैयार छैन, दीवान नेगारालाई सोमबार भनिएको थियो।